वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : 'समुन्द्रसंगको पहिलो भेट'- संस्मरण
१९९२को अगष्ट २१मा हो मैले पहिलो चोटि समुन्द्र देखेको।
पेइचिङ भाषा अध्ययन संस्थानमा एक वर्ष चिनियाँ भाषा पढिसकेपछिको गर्मी बिदा थियो। धेरैजसो साथीहरु नेपाल फर्किएका थिए गर्मी बिदामा। गर्मी बिदा सकिन आँटिसकेको भएपनि म र सबिन(नाम परीवर्तित)ले यो यात्राको योजना बनाएका थियौं।
त्यो दिनको बिहानको खाजापछि हामीले पेइचिङबाट 'पेइताइख' तिरको रेल समातेका थियौं। पेइताइख पेइचिङनजिकैको नामी समुन्द्री किनार र लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तब्य हो। हाम्रो योजना धेरै लामो पनि थिएन, एक रात बस्ने र भोलिपल्ट साँझ पर्दासम्म पेइचिङ आइपुग्ने सूर थियो हाम्रो।
रेलमा हल्का भिड थियो तर हामीले सीट भेट्टाएका थियौं। 'लोकल' रेलको काठे सीटमा मौन भएर बसिरहेका थियौं हामी। हाम्रो सामुन्नेमा एउटी वृद्ध महिला र पाँच-सात वर्षका दुई बच्चीहरु थिए, शायद तीनका नातीनीहरु हुनुपर्छ। एउटी अलिक मोटी र पोक्चे अनुहार भएकी थिई, अर्की दुब्ली र मसिनो अनुहार भएकी थिई। दुबै बच्चीहरु सुन्दर र मायालाग्दा थिए। उनीहरु एकआपसमा कुरा गर्दै हाँस्दै थिए र घरीघरी आफ्नी हजुरआमासंग पनि बिभिन्न कुराहरु सोधिरहेका थिए।
एकछिनपछि उनीहरु हाम्रो बारेमा कुरा गर्न थाले, 'कुन देशका होलान् यिनीहरु---', 'के गर्छन् होला----', 'अहिले कहाँ जान लागेका होलान्---' इत्यादि। उनीहरुलाई हामी चिनियाँ बुझ्दैनौं भन्ने लागेको थाहा हुन्थ्यो उनीहरुको कुरा गराईबाट। हामी धेरै बेर उनीहरुको कुरा सुनी नबोली बस्यौं।
"म चिनियाँ बुझ्छु नि!" एकछिनपचि मैले एउटीको हातमा कोट्याउँदै भनें।
"आब्बुई--!" उनीहरु दुबै तर्सिएर कराए। लाज मानेजस्तो गरेर एकछिन दुबैजना चूपचाप बसे। तर केहि समयमै उनीहरुको बालसुलभ चञ्चलता र जिज्ञासा फिर्ता आयो र उनीहरु मसंग खुलेर कुरा गर्न थाले। हजुरआमासंग पनि केहि कुराकानी भयो। दुईटीमध्ये एउटी छोरापट्टिकी र अर्की छोरीपट्टिकी नातीनी रे उनकी, दुबै पेइचिङमा बस्ने, अहिले गर्मी बिदाको केहि दिन बिताउन उनीसंग गाउँ जान लागेका। म दुइ घण्टाभन्दा बढी तीनै बच्चीहरुसंग कुरा गरेर बसें। यतिञ्जेल सबिने एक शब्द पनि नबोली झ्याल बाहिरको दृस्य हेरेर बसिरह्यो। उनीहरु पेइताइख नपुग्दैको कुनै स्टेशनमा झरे।
हामी पेइताइख पुग्दा त्यस्तै दुई-साढे दुई जति भएको हुँदो हो। सानो शहर थियो। स्टेशनबाट निस्केर नजानिँदो उकालो बाटो जानुपर्ने रहेछ। त्यै उकालोमा खाद्यान्न-सागसब्जीको खुल्ला बजार पनि लागिरहेको थियो। बजारको टुप्पोबाट अलिक झरेपछि समुन्द्र किनार भेटियो, स्टेशनबाट हिँडेको पन्ध्र-बीस मिनेटजतिमा। क्षितिजसम्म लमतन्न फैलिएको समुन्द्रलाई पहिलोचटि देख्दा मन आल्हादित भयो। तर समुन्द्र किनार पूरै सूनसान थियो। एक पाखो बनाउँदै-नबनाई छोडेको, झ्वाट्ट हेर्दा खण्डहरजस्तो लाग्ने दुई तल्ले घर थियो ओरालो सकिनासाथ। घर अगाडि केहि मानिसहरु तास खेल्दै थिए। 'अर्कै ठाउँमा त आईएन कतै--' भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। पहिलोचोटि समुन्द्र देख्दाको खुशीको भाव तुरुन्तै सुकेजस्तो लाग्न थाल्यो। समुन्द्र किनार अत्यन्त फोहर थियो, जताततै प्लाष्टिक र कागतका टुक्राहरु छरिईरहेका थिए। हामीले लख काट्यौं, हामी गलत ठाऊँमा आईपुगेको नभएर पर्यटकीय याम सकिएपछि आईपुगेछौं। तास खेलिरहेकाहरुले पनि त्यसै भन्थे, तीन दिन अगाडिसम्म भिडभाड थियो रे।
झोला तिनै मान्छेहरुका अगाडि फालेर हामी पौडी खेल्न हान्नियौं। पौडिन त्यति नसक्ने भएकोले म छेउतिरै अल्मलिएँ, सबिने भने निकै परसम्म पुगेको थियो। डेढ घण्टाजति समुद्रमा चोपलिएपछि हामी फेरि त्यै खण्डहर घरतिर फर्कियौं। ती मानिसहरु शायद समुन्द्र किनारको सुरक्षाका लागि राखिएका चौकिदारहरु थिए, हामीले सोध्न भने सोधेनौं। तर एकदम रमाइला थिए ती मानिसहरु। हाम्रो क्यामेराले केहि फोटोहरु खिचिदिएर सघाए पनि तीनले। त्यो घरको दोश्रो तल्लामा सानो रेस्टूरेण्टपनि रहेछ। त्यहाँ बसेर बियरको साथमा केहि स्न्याक्सहरु खाएपछि हामी शहरतिर फर्कियौं, भोलि बिहानै फेरि आउने कुरा गर्दै। हाम्रो अबको ध्याउन्न सस्तो लज/होटल खोज्नु थियो रात बिताउन।
तर विदेशीलाई राख्न मिल्दैन भन्न थाले सबै होटलहरुले। पहिलाको 'बन्द' चीनमा त्यस्ता कुरा अत्यन्त सामान्य हुन्थे भन्ने सुनेका थियौं हामीले, तर 'खुलापन'लाई अँगालेको झण्डै डेढ दशक हुन आँटिसकेको चीनमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनौं। त्यो पनि पेइचिङनजिकैको पर्यटकीय स्थलमा! सडकको दुबैतिर लहरै उभिएका होटेलहरुमा पस्ने र 'विदेशीलाई राख्न मिल्दैन' भन्ने जवाफ पाएपछि निक्लने क्रम जारी रह्यो हाम्रो, धेरै बेरसम्म। कति ठाउँमा हामीले 'विदेशी भएर के भो त, पैसा नतिर्ने हैन क्या रे' भन्दै धेरै गल्फती पनि ग-यौं तर सबैले 'नियमै यस्तै छ त, के गर्ने?' भन्दै फर्काए।
"यो त अति भयो यार! अब विदेशी हैन, चिनियाँनै भनेर भएपनि बस्ने कोशिश गरौं।" हामीले सल्लाह ग-यौं। हाम्रो अनुहार चीनको बहुसंख्यक हान जातिका मान्छेहरुसंग नमिलेपनि चीनको 'सिन्चियाङ'भन्ने प्रान्तका मान्छेहरुसंग मिल्ने हुँदा हाम्रो सूर आफूलाई सिन्चियाङको मुसलमान बताएर रात बिताउने थियो। उनीहरुको नाम पनि हाम्रो जत्तिकै 'अनौठो' हुन्छ। (इस्लाम धर्माबलम्बीहरु बढी भएको यो 'स्वशाशित' प्रान्त पाकिस्तानसंग जोडिएको छ।)
हामी एउटा होटलमा पस्यौं। रिसेप्सनमा एउटी २०-२२ वर्षकी केटीमात्रै थिई। हामीले कोठाको लागि अनूरोध गर्यौं।
"कहाँबाट आउनुभएको हो?" हामीलाई सर्सर्ती नियाल्दै उसले सोधी। 'विदेशी हुन् यिनीहरु' भन्ने परिसकेको थियो होला उसलाई।
"सिन्चियाङबाट।" मैले उत्तर दिएँ।
"ल, यो फाराम भर्नुस्।"
मैले हाम्रा नाम, र ठेगाना लेख्नुपर्ने ठाउँमा 'सिन्चियाङ' लेखें।
"सिन्चियाङमात्रै लेखेर त भएन नि! शहरको नाम, टोलको नाम, घर नम्बर सबै चाहियो।" केटी झर्केर बोली।
हामी अल्मलियौं र मुखामुख गर्न थाल्यौं। चीनको सुदूर पश्चिमी प्रान्तको कुनै शहरको नाम समेत राम्ररी थाहा थिएन हामीलाई, अब टोलको नाम र घर नम्बरको त कुरै नगरौं। कुनै त्यस्तो शहरको नाम, टोलको नाम र कुनै घरको सही नम्बर आदि जानेकै भएपनि हामीले समस्याबाट मुक्ति पाउने भने थिएनौं किनभने फारमसंगै 'नागरिकता' मागिने पक्का थियो। चीनका बहुसंख्यक हान जातिले अल्पसंख्यकहरु र विशेष गरी सिन्चियाङकालाई विदेशीजत्तिनै शंकालु नजरले हेर्थे, त्यसैले 'नागरिकता' धरौटी नराखी बास पाइने थिएन, हामी सिन्चियाङको मुसलमान बन्न 'सफल'नै भएपनि।
"हेर मैयां, हामी सिन्चियाङको मान्छे हैन। हामी विदेशी हौं; विदेशी, पाकिस्तानी।" सबिनले भन्यो। 'अप्ठेरो' ठाउँमा आफूलाई 'पाकिस्तानी' वा 'भारतीय' बताएर फुत्किने हाम्रो पूरानै 'चलन' थियो। [हाम्रो काइते 'देशभक्ति!:) तर हामीमात्रै भने हैन, पाकिस्तानीहरु आफूलाइ 'भारतीय' भनेर उम्किन्थे, श्रीलंकालीहरु आफूलाई 'बंगलादेशी' भन्थे---, सबैको 'चलन' यस्तै थियो:)विदेशी त्यति धेरै नदेखिसकेका चिनियाँहरुले सजिलै पत्याउँथे।]
"अनि किन ढाँटेको त---?" केटी रिसाई।
"अब, विदेशीलाई बस्न नदिने भने सबैतिर, अनि नढाँटेर के गर्ने त--?!"
"विदेशीलाई त यहाँ पनि मिल्दैन!" अघि हामीले भरेको फारमलाई डष्टबीनतिर फाल्दै रिसेप्सनिष्ट बोली।
"-----! ------!" नेपाली भाषाका दुई-चार फोहर शब्दहरुको 'सदुपयोग' सहित आफ्नो रिस ओकल्दै बाहिर निस्कियौं हामी।
"तपाईँहरुलाई कोठा चाहिएको हो?" एकजना अधबैशं महिला हामीतिर आईन्। अघि रिसेप्सनिष्टसंग हाम्रो कुराकानी हुँदा नजिकै बसेर सुनिरहेकी देखेको थिएँ मैले।
"मेरो पनि लज छ, कोठा खाली छ। विदेशीलाई पनि राख्ने गरेको छ। तर यहाँबाट पाँच-सात मिनेट लाग्छ साइकलमा।"
"ए, हो र?!" बल्ल अलिक हँसिलो बोली आयो हाम्रो। "पाँच-सात मिनेट त के टाढा हो र?"
"त्यसो भए मेरो साईकलमा लान्छु नि म दुईजनालाई पालै-पालो, हुन्न?"
ती महिलाले पालै-पालो ओसारिन् हामीलाई।
तल्लो तल्ला रेष्टूरेण्ट र माथिल्लो लज थियो शायद। रेष्टूरेन्ट निकै सफा थियो। अरु केहि मानिसहरु पनि थिए तर ती ग्राहकहरु नभएर लजसंगै सम्बन्धित मानिसहरुजस्ता लाग्थे। 'सुत्ने ठाउँ'को चिन्ता हराएकोले मस्तसंग बियर पिउन थाल्यौं हामी। खाना पनि निकै राम्रो थियो त्यहाँ। खानाको पैसा र कोठाभाडा बेग्लाबेग्लै तिर्नुपर्ने भनियो हामीलाई। बेलुकाको खानालाई भनेर छुट्याएभन्दा अलिक बढीनै खर्च भयो हाम्रो, तैपनि हामी धेरै खुशी थियौं। खाना खाईसकेपछि एकछिन त्यत्तिकै गफ गरेर बस्यौं ।
"माफ गर्नुस्।" अब कोठा देखाईमाग्न प-यो भन्ने कुरा गर्दै थियौं हामी, अघिकी 'साइकलवाली' महिला हामीतिर आईन्। "यहाँ विदेशीलाई राख्न नमिल्ने रहेछ।"
"हँ------!" वियरको नशा उत्रियो हाम्रो। "अनि अघि किन नभनेको त? विदेशीलाई पनि राख्न मिल्छ भनेको हैन अघि?!" हामी रिसले मुर्मुरिएका थियौं। रातको नौ बजिसकेको थियो।
"मलाई थाहा थिएन---!" ती महिला निकै नम्र भएर बोल्ने कोशिश गर्दै थिईन्।
"त्यसो भनेर हुन्छ? यस्तो धोका दिने हो? हामी अन्तै जान्थ्यौं नि----!" हाम्रो स्वर निकै चर्को थियो।
हामी चर्को स्वरले कराएको देखेर अरु पनि आए हामी भएको टेबुलतिर। 'विदेशी राख्न नपाईने नियम छ यहाँ' भनेर कराउन थाले उनीहरुपनि। धेरै बेरको गल्फतीपछि, अलिक नम्र भएर कुरा गर्दा ठिक हुन्छ कि भनेर 'मानवीयताको नाताले भएपनि एकरात बस्न दिन' अनूरोध ग-यौं अन्त्यमा हामीले। तर कथित 'नियम' हाम्रो 'मानवीयता'को अनुनयभन्दा बलियो ठहरियो।
"अघिको ठाउँसम्म पु-याएर छोडिदिन्छु---" 'साइकलवाली' साँचिली पल्टिईन् फेरि।
"प-या छैन---!" रिसले मुर्मुरिँदै हामी बाहिर हुर्रियौँ।
एकछिन त्यसै बरालियौं। कता जाने भन्ने टुंगो थिएन हाम्रो। सानो शहर भएकोले हराइएला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन। कम्तिमा ट्रेन स्टेशन त सजिलै भेटिने आत्मविश्वाशमा थियौं हामी।
पेइचिङको 'विदेशी भाषा अध्ययन संस्थान'ले यो शहरमा एउटा गेष्ट हाउस चलाएको छ भन्ने थाहा थियो हामीलाई। महंगो होला भन्ने सोचेर दिउँसो त्यता गएका थिएनौं हामी। बाटोका केहि मान्छेहरुसंग सोध्दै त्यहाँ पुग्यौं। तर गेष्ट हाउसमा कोठा खाली नभएको जानकारी मिल्यो त्यहाँ पनि। अघिल्लो दिन मात्रै पेइचिङबाट एउटा ठूलो समूह आएर बसिरहेको रहेछ। त्यहाँको रिसेप्सनिष्टबाट नजिकैको अर्को होटेलमा जाने सल्लाह मिल्यो। त्यो होटल, हेर्दै महंगो देखिन्थ्यो, तैपनि हामी पस्यौं। कोठा त रहेछ तर एक रातको १५० यूआन रे! हामी दुबैसंग भएको पैसा जोड्दापनि त्यति पुग्दैनथ्यो! फेरि भोलिपल्ट पेइचिङ फर्कनु पनि थियो।
कुनै उपाय बाँकी रहेन अब! होटेलबाट लगभग २ सय मीटरजति अगाडि एउटा सानो पार्क थियो। हामी त्यतै लाग्यौं। पार्कमा बेञ्चहरु थिएनन्। बीचमा रहेको एउटा खाँबोको टाउकोमा बडेमानको बत्ती बलिरहेको थियो।
"यो हाल्नचाहिँ कसरी सम्झिइस् नि यार?!" सबिनले झोलाबाट एउटा पातलो टाटजस्तो निकालेर ओछ्याउन थालेको देखेर मैले सोधें।
"झोलामा के हालौं-के हालौं भएर कोचेको---, काम लाग्यो।"
"काम लाग्या हो कि यहि टाट अलच्छिनी परेर सुत्ने ठाउँ नपाईएको हो---!"
रातको दश बजिसकेको भएपनि एकदम गर्मी थियो। लामखुट्टे त्यत्तिकै धेरै थिए। हामी कहिले झोलाको सिरानी बनाएर पल्टिने, कहिले पलेंटी कसेर बस्ने गरेर रात बिताउने कोशिशमा थियौं।
"सर्पले टोक्यो भने के गर्ने यार---?"
"मचाहिं छोड्दिंन त्यो सर्पलाई! म पनि टोक्दिन्छु तेल्लाई---!" बेला-बेलामा यस्तै कुरा गरेर हाँस्ने कोशिश पनि गर्दै थियौं हामी। तर दिनभरिको थकाई र वियरको नशा मिसिएर लठ्ठिएका हामीसंग बोल्ने र हाँस्ने शक्ति भने खासै थिएन।
बिहान चार बजेतिरबाट सिमसिम पानी पर्न थाल्यो। हल्ला गर्दै र पेइताइखलाई मातृभाषा-रात्रिभाषामा गाली गर्दै हामी ट्रेन-स्टेशनतिर लाग्यौं। त्यहाँबाट पन्ध्र मिनेटमै पुगियो। पहिलो रेल छ बजेमात्रै छुट्ने रहेछ।
दिउँसो खाना खाने बेलासम्म हामी आफ्नै छात्रावास पुगिसकेका थियौं।
(यो संस्मरण मैले २०५७सालतिरै लेखेर 'हटलाईन दैनिक' नाम गरेको, पोखराको एक स्थानीय दैनिक पत्रिकामा छपाएको थिएँ। पत्रिकाको यो लेखको अंशपनि जोगाएर राखेको थिएँ। अहिले खोज्दा भेटिएन; नेपालमै छुट्यो कि हरायो थाहा भएन। ब्लगलाई अलिक विविधतायुक्त बनाउँ भनेर यो 'पुनर्लेखन'नै भएपनि टाँसेको छु।)
Posted by Basanta at 4:59 PM
दिलीप आचार्य July 24, 2008 at 9:27 PM
यो यात्रा संस्मरण पहिले पनि मौखीक रुपमा सुनेको हो । पछि मलाई "सबिन" ले पनि सुनाएको हो । तर यसरि पढदा भने, म पनि त्यतिबेला त्यहि भएको जस्तै महशुस भयो । सायद सबै परिचित स्थान र पात्र भएकोले होला ।
त्यति बेला त दु:ख पाईयो होला । मलाई सबिन ले पनि यो वृतान्त सुनाउँदा "त्यतिबेला त दु:ख पाईयो तर अहिले सम्झदा रमाईलो लाग्छ" भनेको थीयो ।
२ बर्ष अगाडि पून चिनमा पुग्दा पनि गाह्रो, साँगुरो पर्दा "पाकिस्तनी" भनेर हिडने गोर्खाली प्रवृति अझै कायम भएको कुरा नया साथिहरुले सुनाएका थीए ।
पुरानो स्मृति ताजा भयो, रमाईलो लाग्यो ।
कैलाश July 24, 2008 at 9:35 PM
Aree yaar, Informative and interesting memoir.
I like to read the memoir/travellogue. अनि पोक्चे भन्ने शब्दले मलाई गाउँको सम्झ्ना आयो । हम्रो गाउँमा यो शब्द निकै चल्थ्यो । but i, personnaly don't like the word पोक्चे/पोक्चि . सुन्दर अनुहारको मायालु उपमाको रुपम प्रयोग् भएपनि यो कानलाई किन हो कुन्नी अप्रिय लाग्छ ।
दीपक जडित July 25, 2008 at 9:01 AM
रमाईलो भएछ नि , मलाई त त्यसबेला पनि तपाईंहरुलाई रमाईलै लाग्यो होला झैं लाग्यो । यात्रामा हराएर या यस्तै कारणले कष्ट उठाउनु पर्दा मलाई त रमाईलो लाग्छ ।
badri July 25, 2008 at 10:10 AM
यो यात्रा संस्मरण रमाईलो रहेछ नि , कती पये अतितका कठिन् यात्राहरु हाल सम्जिदा रमाइलोनै हुने गर्द छ,
Basanta Gautam July 28, 2008 at 10:35 AM
दिलिप दाइ, त्यो 'सबिने' अहिले कता छ, केहि थाहा छ तपाईंलाई? भेट नभएको धेरै भयो।
कैलाशजी, मैले पनि माया गरेरै प्रयोग गरेको हुँ यो 'पोक्चे' शब्द। यत्तिको सटीक शब्द अरु कुनै थाहा भएन मलाई। तपाईँलाई थाहा छ कि? त्यसपछि यो शब्दको प्रयोग नगरौंला।
दीपकजी, त्यतिबला बेकारको हण्डर उठाइएछ जस्तो लागेको थियो, अहिले सम्झिँदाभने रमाईलै लाग्छ।
बद्रीजी, ठीक भन्नुभयो, कठिन यात्राहरु पनि स्मरणमा रमाईला लाग्छन्।
धाइबा August 11, 2008 at 7:21 PM
यस्तै मुस्लिएको अनुभूति-बयान पढेर हो तपाईँसँग म नजिकिएको । पहिले तपाईँले 'आमा-अनुभूति'मार्फत मलाई आँगनको तुलसीमठसम्मन् तानेर ल्याउनुभयो, अब म आफ्नै सुरले तपाईँका कोठाहरूमा कमलो मादकता पाउँदै अर्को-अर्को दैलोसँगै प्रवेश भइरहेछु । जे-जस्तो रुप-अवस्था छ, त्यसलाई सरक्क अक्षरहरूमा उतार्ने र सक्ने तपाईँको विशेषता र क्षमताले पाठक पारखी बनिहाल्छन् ।
१६ वर्षअघिको समुद्री छुवाइलाई यतिपछि पढ्दा पनि ताजगीको मात्रा भरपूर पाएँ । अनि तपाईँको स्मृति पनि त चखिलो/चहकिलो दुवै रहेछ नि ! पढुन्जेल शब्दहरूले तपाईँहरूसँगै पछ्याएर लगिरहन्छ । सिजन उत्रेपछिको फिका 'महफिल'मा पौडी खेल्दा र बास बस्ने क्रममा यात्रीद्वय विदेशी हुनुको परिचय/अपरिचयले गलहत्तिन बाध्य हुँदा पाठक बेस्कन उत्रिन्छ र विस्मात्ले डुबिहाल्छ । पानीको समुद्र होइन, त्यहाँ त अर्कै समुद्रको छ्‌यालब्याल पो असरदार रहेछ ।
चीनको पेइताइखमा विदेशीहरूले त्यस्तो 'अतिथि सत्कार' को नमूना बन्न पाउँदा रहेछन् । पढ्दापढ्दै यता आफ्नै देशको ठीक उल्टो ताल सम्झेर चसक्क बिझ्यो । नेपालीहरू नेपालीहरूबाटै अपहेलित छन् । देशभित्र कतै घुमुवा बनेर स्थानीय ठाउँबाट अन्यत्र जाँदा पैसा तिर्न सक्ने नेपालीले पनि गुणस्तरीय सेवा, इज्जत र मानवीय शिष्टाचार पाउँदैनन् । आन्तरिक पर्यटक पनि हुन्छन् है भन्नेमा वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूले रत्तिभर पनि सोच्न नसकेको दरिद्रता यहाँ देख्‍न-भोग्न पाइन्छ । तिनका नजरमा खैरा छाला र कैला कपाल भएका खास विदेशीहरू मात्रै 'टुरिस्ट' र 'गाइ' को रुपमा सेवाग्राही पाहुना हुन् । स्वदेशीहरू त तिनका लागि देख्दै तर्साउने कुरुप 'साँढे गोरू' !
चीनकोजस्तै हाल बसोबासको जापानी जीवनशैली र तपाईँको निजी भोगाइ पनि पढ्न पाइयोस् ।
Basanta Gautam August 12, 2008 at 4:04 PM
धन्यबाद धाइबाजी! यो मेरो झुपडीसम्म यति मायाका साथ आउने गर्नु भएकोमा अत्यन्त आभारी छु।
तपाईँले उप्काउनुभएको हाम्रो आफ्नै देशभित्रको ब्यथा साँच्चै हाम्रो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो। नेपालीहरु नेपालीलाई हेप्न मनपराउँछन्। झन् पर्यटकीय क्षेत्रका हाम्रा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरु त नेपालीलाई देख्नै सक्दैनन्। 'विदेशीकै जति पैसा तिरेर खान्छु-बस्छु' भन्दा पनि पोखराको लेकसाइडका होटल-रेष्टुरेण्टहरुबाट नेपालीहरु लघारिएको धेरै देखेको छु र कतिपटक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आफैंले पनि भोगेको छु। माओवादी 'जनयुद्ध' ताका विदेशी कम आउन थालेपछि भने बल्ल नेपालीको अलि-अलि सम्मान गर्थे ती 'साहू'हरुले। ग्राहक कम भएर धेरै होटल-लज बन्द हुँदा एक मन त 'ठीक्क भयो जाँ--हरुलाई!' भन्ने नलागेको पनि हैन। अचेल फेरि 'गोरा'हरुको ओइरो लाग्न थालेपछि पर्यटकीय क्षेत्रका हाम्रा स्वदेशी बन्धुहरुमा पूरानै बानी फर्किसक्यो होला।
दुनियाँका जुन-जुन देशमा दह्रो आन्तरिक पर्यटन फस्टाएको छ, त्यहाँको पर्यटन उद्योगले घाटा बेहोरेको कमै छ। अब हाम्राहरुमा पनि सद्बुद्धि आओस्।
जापान बसाइका अनुभवहरु पनि लेखौंला मौका मिल्दा हुँदी।
yo lakha maali saari ramro lago kina ki maaila pani hong kong jasto thau ma basara to samsa bhogako ane dhari dakhko chu..... samaya jati paribartan bhaya pani mancha la tasli aafuma lagu garna saka ko chaina tas mathi ta bedasi harula hamilai hamro babra bata haina maro colour bata harna garcha ,
ja hosa phari pani yasta lakha haru padna aasha sayita beda huna chanchu thanku
Basanta June 25, 2009 at 1:57 PM
धन्यबाद रीताजी! ब्लगमा स्वागत छ! भविष्यमा पनि तपाईँका प्रतिकृयाहरुको आशा गरेको छु।
Kiran Babu Tiwari June 30, 2009 at 1:18 PM
Basanta sir, I live your story. Intresting.
Basanta June 30, 2009 at 4:53 PM
Thank you Kiranjee!
Rishav Atreya August 26, 2009 at 6:19 AM
ajako fursad ko dinma kam khasai thiyan ghumda gumdai yeta ayeko chiya pani bhayo aba farkanu parla....